Kismaayo News » Hawada Soomaaliya oo la’isku heysto
Hawada Soomaaliya oo la’isku heysto
Kn: Tan iyo intii ra’isulwasaarihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalbaday in maamulka hawada Soomaaliya lagu soo wareejiyo dowladda Soomaaliya ayaa waxay wax kasoo naaso cadaanayaan fulinta dalabkaasi.
Hawada Soomaaliya waxaa laga xukumaa Kenya, waxaana gacanta ku heysta hey’ad Qaramada Midoobey oo bishii ka samaysa macaash malaayiin doolar ah oo canshuur ahaan looga qaado dayuuradaha isticmaala hawada Soomaaliya, sida ay KismaayoNews horey u faafisey maalintii waxaa hawada Soomaaliya isticmaasha 90 duulaamiyaad celcelis ahaan, iyadoo ay kasoo xarooto hal malyuun oo doolar maalin kasta, balse lacagtaasi aanan la ogeyn halka ay ku dhibicdo.
Dhawaan Qaramada Midoobey ayaa guddi kormeer ah u saartay suurtagalnimada in maamulka hawada lagu wareejiyo Soomaaliya, gudigani waxa ay socdaal ku tageen meelo kala duwan oo dalka ka mid ah sida caasimadda, Puntland iyo Somaliland.
Waxaa jira go’aan aanan wali la shaacinin oo ah in xafiiska Xamar la geeyo, oo ay maamusho dowladda KMG ah iyada oo Qaramada Midoobey kor kala socoto.
Laakiin waxaa arrinkaasi kasoo horjeedsaday maamulka Somaliland oo gudiga u sheegey in aysan marnaba ogolaan doonin in hawadooda laga maamulo Xamar, taasi badalkeeda waxa ay ka doorbidayaan in laga maamulo Hargeysa oo ay sheegeen in ay tahay meel nabad ah, kana jiro nidaam duulimaadka hawada oo shaqaynaya.
Somaliland waxa ay dalbanayso ma ahan in maamulka hawadeeda gaar looga dhigo, balse waxa ay codsanaysa in dhamaan maamulka Soomaaliya oo dhan ee hawada lagu soo wareejiyo, wasiirka duulimaadka hawada ee Somaliland oo dhawaan hadlayna waxa uu sheegey in ay qaadici doonaan, xiriirkana u jari doonaan haddii xafiiskaasi saldhigiisa laga dhigo Xamar.
Si kastaba ha ahaatee, meel kasta oo saldhig looga dhigi xafiiska waxa uu noqonayaa hanti qaran oo dalka dib ugu soo laabatay, iyadoo dhaqaalaha kasoo xarooda haddii si wanaagsan loo maamulo uu noqon karro mid aaqibo yeesha.
Haddii ay dhacdo in Soomaaliya lagu wareejiyo maamulka hawada waxaa loo baahanayaa shaqaale xirfad leh oo xafiiska kala wada, iyadoo qalabka xafiiska uu ku shaqeeyana uu yahay mid casri ah sida raadaaro kala hagga dayuuradaha hawada ku jira si aysan isugu dhicin, ogaada dayuurada hawada soo gashay, tan fasaxa la siinayo iyo tan loo diidayo, tan ogolaanshaha heysata iyo tan aan heeysanin, iyo dabcan arrinta ugu muhiimsan oo ah badbaada duulimaadyada sidii loola socon lahaa hadba xaaladda ay ku suganyihiin iyadoo isha lagu heynayo isbadalka cimilada.